Asomafo Nnwuma 23 | Intanɛt So Bible| Wiase Foforɔ Nkyerɛaseɛ
Asomafo Nnwuma 23:1-35
Paul kasae wɔ Sanhedrin no anim (1-10)
Awurade hyɛɛ Paul den (11)
Ebinom bɔɔ pɔw sɛ wobekum Paul (12-22)
Wɔde Paul kɔɔ Kaesarea (23-35)
23 Paul hwɛɛ Sanhedrin bagua no dinn, na ɔkae sɛ: “Mmarima, anuanom, mede ahonim* pa+ abɔ me bra wɔ Onyankopɔn anim abesi nnɛ da yi.” 2 Ɛnna ɔsɔfo panyin Anania ka kyerɛɛ wɔn a wogyinagyina ne nkyɛn no sɛ wɔmmɔ n’ano so. 3 Na Paul ka kyerɛɛ no sɛ: “Onyankopɔn rebɛbɔ wo, wo ɔfasu a wɔaka ho fitaa. Woatena ase de Mmara no rebebu me atɛn, ɛnna bere koro no ara worebu Mmara no so aka sɛ wɔmmɔ me?” 4 Ɛnna wɔn a wogyinagyina hɔ no bisaa no sɛ: “Onyankopɔn sɔfo panyin na woreyeyaw no no?” 5 Na Paul kae sɛ: “Anuanom, minnim sɛ ɔyɛ ɔsɔfo panyin. Efisɛ wɔakyerɛw sɛ, ‘Nka obi a odi wo man so ho asɛmmɔne.’”+ 6 Bere a Paul hui sɛ nnipa no fã yɛ Sadukifo, ɛnna fã nso yɛ Farisifo no, ɔteɛɛm wɔ Sanhedrin bagua no mu sɛ: “Mmarima, anuanom, meyɛ Farisini,+ Farisifo ba. Owusɔre a awufo benya no, ɛho anidaso nti na wɔrebu me atɛn yi.” 7 Asɛm a ɔkae yi nti, akasakasa baa Farisifo ne Sadukifo no ntam, na bagua no mu kyɛɛ abien. 8 Efisɛ Sadukifo no ka sɛ owusɔre anaa abɔfo anaa honhom nni hɔ, na Farisifo no de, wogye ne nyinaa di.*+ 9 Enti ɛhɔ yɛɛ gyegyeegye, na akyerɛwfo a wɔyɛ Farisifo no bi sɔree, na wɔkasakasae denneennen sɛ: “Yenhu mfomso biara wɔ onipa yi ho, nanso sɛ honhom anaa ɔbɔfo bi kasa kyerɛɛ no a,+ ɛnde—.” 10 Afei bere a akasakasa no yɛɛ kɛse no, na ɔsahene no suro sɛ wɔbɛtetew Paul mu. Enti ɔhyɛɛ asraafo no sɛ wonsian nkogye no mfi wɔn nsam, na wɔmfa no mmra asraafo asoɛe hɔ. 11 Anadwo a edi hɔ no, Awurade begyinaa ne nkyɛn, na ɔkae sɛ: “Nya akokoduru!+ Na sɛnea woadi me ho adanse frenkyemm wɔ Yerusalem no, saa ara na ɛsɛ sɛ wudi adanse wɔ Roma nso.”+ 12 Bere a ade kyee no, Yudafo no bɔɔ pɔw, na wɔkaa ntam sɛ wɔrennidi na wɔrennom kosi sɛ wobekum Paul. 13 Mmarima bɛboro 40 na wɔbɔɔ pɔw kaa ntam no. 14 Saa mmarima no kɔɔ asɔfo mpanyin no ne mpanyimfo no hɔ kɔkae sɛ: “Yɛadi nsew aka ntam sɛ yɛremfa hwee nka yɛn ano kosi sɛ yebekum Paul. 15 Enti mo ne Sanhedrin no nka nkyerɛ ɔsahene no sɛ, ɔmfa Paul mmrɛ mo. Monyɛ mo ho te sɛ nea mopɛ sɛ muhu n’asɛm no mu yiye no. Nanso yɛremma ommedu ha mpo na yɛakum no.” 16 Na Paul wɔfase* tee sɛ nkurɔfo no afa adwene sɛ wɔbɛkɔ akɔtetɛw Paul, enti ɔbaa asraafo asoɛe hɔ bɛbɔɔ Paul amanneɛ. 17 Ɛnna Paul frɛɛ asraafo mpanyimfo no baako, na ɔka kyerɛɛ no sɛ: “Fa aberante yi kɔ ɔsahene no hɔ, na ɔpɛ sɛ ɔka asɛm bi kyerɛ no.” 18 Enti ɔfaa no, na ɔde no kɔɔ ɔsahene no nkyɛn. Ɛnna ɔkae sɛ: “Ɔdeduani Paul frɛɛ me, na ɔka kyerɛɛ me sɛ memfa aberante yi mmrɛ wo, na ɔpɛ sɛ ɔka asɛm bi kyerɛ wo.” 19 Na ɔsahene no soo aberante no nsa de no kɔɔ nkyɛn, na obisaa no sɛ: “Asɛm bɛn na wopɛ sɛ woka kyerɛ me no?” 20 Ɔkae sɛ: “Yudafo no ayɛ adwene sɛ, wɔbɛsrɛ wo ama wode Paul abrɛ Sanhedrin no ɔkyena. Wɔbɛyɛ wɔn ho te sɛ nea wɔpɛ sɛ wohu n’asɛm no mu yiye no.+ 21 Nanso mma wɔnnnaadaa wo, efisɛ wɔn mu mmarima bɛboro 40 akɔtetɛw no, na wɔaka ntam* sɛ wɔrennidi na wɔrennom kosi sɛ wobekum no.+ Na seesei wɔayɛ krado. Nea wɔretwɛn ara ne sɛ wobɛpene so ama wɔn.” 22 Enti ɔsahene no ka kyerɛɛ aberante no sɛ: “Nka nkyerɛ obiara sɛ woaka asɛm yi akyerɛ me.” Ɛnna ɔma ɔkɔe. 23 Na ɔfrɛɛ asraafo mpanyimfo baanu, ɛnna ɔka kyerɛɛ wɔn sɛ: “Momma asraafo 200 mmoaboa wɔn ho, na momma asraafo 70 a wɔtete apɔnkɔ so, ne asraafo 200 a wokurakura mpeaw nso mmoaboa wɔn ho, na monkɔ Kaesarea anadwo dɔn a ɛto so abiɛsa* no mu. 24 Afei nso, mompɛ apɔnkɔ mma Paul ntena so nkɔ amrado Felike hɔ dwoodwoo.” 25 Ɛnna ɔkyerɛw krataa. Emu nsɛm ni: 26 “Me, Klaudio Lisia na merekyerɛw krataa yi. Merekyerɛw abrɛ wo, Onuonyamfo Amrado Felike: Asomdwoe nka wo! 27 Yudafo no kyeree ɔbarima yi a anka wɔrebekum no, nanso ntɛm ara na mede m’asraafo kogyee no,+ efisɛ mihui sɛ ɔyɛ Romani.+ 28 Ná mepɛ sɛ mihu sobo a wɔrebɔ no, enti mede no kɔɔ wɔn Sanhedrin bagua no anim.+ 29 Mihui sɛ wɔn Mmara no ho nsɛmnsɛm bi na wɔde abɔ no sobo,+ nso sobo no mu baako mpo nni hɔ a yebetumi agyina so akum no anaa yɛagu no nkɔnsɔnkɔnsɔn de no ato afiase. 30 Nanso obi abɛka akyerɛ me sɛ nkurɔfo abɔ ɔbarima no ho pɔw.+ Ɛno nti na ntɛm ara mede no rebrɛ wo no. Maka akyerɛ wɔn a wɔwɔ biribi tia no no sɛ, wɔmmɛbɔ no kwaadu wɔ w’anim.” 31 Enti asraafo yi faa Paul+ sɛnea wɔahyɛ wɔn no, na wɔde no baa Antipatri anadwo no. 32 Ade kyee no, wɔmaa asraafo a wɔtete apɔnkɔ so no de no kɔe, na asraafo a aka no san baa asraafo asoɛe hɔ. 33 Asraafo a wɔtete apɔnkɔ so no kɔɔ Kaesarea de krataa no kɔmaa amrado no, na wɔde Paul nso hyɛɛ ne nsa. 34 Enti ɔkenkan krataa no, na obisaa Paul ɔmantam ko a ofi mu, na ohui sɛ ofi Kilikia.+ 35 Ɛnna ɔka kyerɛɛ no sɛ: “Sɛ wɔn a wɔabɔ wo sobo no ba a,+ mɛyɛ aso atie wo yiye.” Na ɔhyɛe sɛ wɔnwɛn no wɔ Herode ahemfi* hɔ.
^ Anaa “wɔka sɛ ne nyinaa wɔ hɔ.”
^ Anaa “Paul nuabea babarima.”
^ Anaa “wɔadi nsew.”
^ Kyerɛ sɛ, bɛyɛ anadwo nnɔn 9.
^ Anaa “aban mu.”
Asomafo Nnwuma 23